Fampisehoana LED Console LED, Fampisehoana LED an'ny Fantasy LED, Mpanamboatra Fampisehoana LED Fampisehoana LED any Chine, mpamatsy fotsim-bidy LED an'ny mpamatsy DJ Console ao Shina
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Fampisehoana LED Console LED, Fampisehoana Dikan-tsarimihetsika Fantasy LED, Video Fampisehoana LED an'ny LED, Fampisehoana LED an'ny tantely honeycomb,,
Home > Products > Ny efijery fampisehoana fahaiza-mitarika > Fampisehoana LED Console LED
Ny vokatra avy amin'ny Fampisehoana LED Console LED , mpanofana manokana avy any Shina, Fampisehoana LED Console LED , Fampisehoana Dikan-tsarimihetsika Fantasy LED mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Video Fampisehoana LED an'ny LED R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Priva Diamond Dj Booth Display dia fantatra amin'ny alàlan'ny efijery mamorona, izay misy fiantraikany manafintohina mahery vaika kokoa noho ny tontonana fampisehoana nentim-paharazana. Izy io dia tsy vaky ny fetran'ny endrika mahazatra, fa tsy mitovy amin'ny efijery fampisehoana efa nitarika...
Famirapiratry ny haingam-pandeha mahery vaika : pikantsary P5 Indoor DJ Booth Display Screen Background dia betsaka kokoa amin'ny fampivoarana ny fotoana, indrindra fa ny fampisehoana Interaktif DJ Booth . Miaraka amin'ny alàlan'ny famolavolana 1R1G1B sy fehin-kiraro famirapiratra avo lenta, ny Prva...
Fonosana: raharaha kitay / sidina
Priva LED DJ Booth Display miaraka amin'ny marika marobe dia efijery manokana manana endrika fananganana manokana, izay novaina miorina amin'ny efijery fampiratiana voalohany. Ny fampiasa amin'ny endriny dia azo ampifanarahana tsara kokoa amin'ny rafitry ny tranobe sy ny fepetra amin'ny tranobe,...
Fiainana mahafinaritra, mankafy ny tsy misy ahiahy! Ny Preva LED DJ Console Show Stage Backgroundt dia iray amin'ireo karazan-damba notarihina, izay namboarina araka ny fangatahan'ny mpanjifa. Fialam-boly bebe kokoa hatrany, ny fanavaozana ihany no mety ho ampy hisarihana ny mpanjifa. Amin'izao fotoana...
Tamin'ny fanavaozana ny vanimpotoana dia mihamalaza hatrany hatrany ny Priva Indoor LED DJ Console Display, na inona na inona izy io. P5 LED DJ BoothDisplay Music Events miaraka amin'ny hexahedron dia antsoina koa hoe 3D Cube LED Display ho an'ny dokambarotra. Tsy toy ny rindrina mahazatra rindrambaiko LED...
Shina Fampisehoana LED Console LED mpamatsy
Ny LED DJ Console Display dia karazana efijery fisehoana elektronika izay natao namboarina ary natao araka ny fepetra takian'ny mpanjifa. DJ Table LED Stage Display dia azo ampiharina amin'ny sehatry ny sahan'ny maro noho ny fahafahany mifehy sy mifangaro. Izy io dia marika iray marika, izay fomba fiasa miavaka indrindra.
Misy fiantraikany amin'ny sehatra izany, manomboka amin'ity fotoana ity. Azo ampiasaina betsaka amin'ny bara, KTV, fampisehoana fampisehoana ary toerana hafa.
1. Fiantraikany mahafinaritra, tetezamita matevina
2. Manangona sy manafoana ny famolavolana haingana, sy ny fikojakojana haingana
3. Famoronana tsy manam-paharoa miavaka, hevitra momba ny famoronana 3D
Fampisehoana Dikan-tsarimihetsika Fantasy LED
Video Fampisehoana LED an'ny LED
Fampisehoana LED an'ny tantely honeycomb